Commission starts verification of Zimbabwean presidential vote
According to the Herald, the figures which Biti was quoting add up to 49.1 percent of the vote for the MDC candidate, Morgan Tsvangirai, not the 50.3 percent which Biti declared.
A vote of over 50 per cent is required under Zimbabwean law to win the presidential election outright and avoid a run-off vote.
In the same edition the newspaper said the police had arrested 10 members of the opposition MDC in relation to post-election violence.
The paper said the opposition supporters had been arrested in Harare and in Bindura - about 80 kilometres north of the capital - for crimes ranging from public violence, kidnapping, attempted murder to resisting arrest.
The arrests come on the heels of counter-accusations by the opposition that its supporters were being assaulted by senior Zanu-PF members and militia for voting against President Robert Mugabe's party in the March election.
It was unclear whether Tsvangirai would take part in a run-off vote if the commission confirms that he did not achieve more than 50- per-cent of the vote against the background of the claims of violence.